Kenya oo sheegatey inay Al Shabaab ku karbaashtey colaada ka aloosna K/ Somaliya – SBC
Kenya oo sheegatey inay Al Shabaab ku karbaashtey colaada ka aloosna K/ Somaliya
Posted by editor on October 22, 2011 Comments
Dawlada Kenya ayaa maanta shaaca ka qaaday inay meesha ka saartey qatartii ay ka fileysey xoogaga Shabaabka isla markaana ay haatan baxsad yihiin tan iyo markii ay ciidamada ku daabushay xuduuda Soomaaliya & Kenya.
Wasiirka arimaha dibada ee dalka Kenya Moses Wetangula oo shir jaraa’id ku qabtey magaalada Adis Ababa ayaa sheegay inay guulo wax ku ool ah ka gaarayaan xarakada Shabaabka oo uu ku eedeeyey inay masuul ka yihiin afduubyada dadka shisheeyaha ee ay ka geysanaayan gudaha Kenya.
“Waxaynu sameynay horumar aan caadi aheyn Al-Shabaabna haatan waxay ku jiraan baxsasho ama carar, waxay kaloo maalinba maalinta ka dambeysa la kulmayaan awood daro” ayuu yiri wasiirka arimaha dibada Kenya oo ka qayb galayey shir degd eg ah oo wadamada ururu Goboleedka IGAD ku yeesheen maanta magaalada Adis Ababa.
Ciidamada Kenyan ayaa gudaha u galey Soomaaliya lix maalmood ka hor iyagoo ku andacoonaya inay qorsheynayaan sidii ay meesha uga saari lahaayeen Al-Shabaab oo ay ku eedeeyeen inay masuul ka yihiin afduubka dad ajanabi ah oo laga qafaashay dalka Kenya, iyadoo sidoo kale ku doodayso in Al-Shabaab ay qatar ku yihiin sumcada Kenya ee la xiriirta arimaha maalgashiga & dalxiiska.
Laakiin talaabada Kenya ay ciidamada ku soo galisay dalka waxaa si kala duwan uga hadley shacabka iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed, kuwaasi oo ku kala aragti duwan, xildhibaanada baarlamanka Soomaaliya ayaa ku tilmaamay talaabada Kenya mid xadgudub ah qaranimada Soomaaliya, isla markaana ugu baaqay Kenya inay ciidamadeeda kala laabato ciida Soomaaliyeed.
Laakiin xubno ka mid ah golaha wasiirada dawlada KMG Soomaaliya iyo siyaasiyiin uu ka mid yahay madaxweynaha Puntland ayaa soo dhaweeyey talaabada ciidamda Kenya ku soo galisay gudhaa Soomaaliya.
SBC Adis Ababa